Vola CJDropshipping serivisy - Ny fiaraha-miasa ataon-dresaka ankafizinao amin'ny fitrandrahana, famenoana, POD, COD ary fandefasana haingana.
Fanafody 4 Maneran-tany
Trano fitehirizam-bokatra 2 any CN
Fanafody 2 any Etazonia
FBA mankany Amazon
Agent tany Chine
Famantaran-fotsy sy marika
Ahoana ny fanafarana baiko Excel na CSV
2018 USPS tahan'ny Fampitahana ho an'ny mpampiasa CJ
navoakan'ny Andy Chou at 03 / 28 / 2018
Fantatrao avy aminay
Vaovao momba ny fandefasana baomba
Ny fanavaozana ny politikantsika
CJ DropShipping trano fanatobiana amerikana
Samy manatanteraka sy milatsaka ho anao!
Kitiho eto hahalalanao ny fampiasana ny serivisy CJ Fahatanterahana
TOKONDRANA FIVAROTANA AN-TANY Etazonia (vokatra namboarina na notsofina tany amin'ny trano fanatobiana CJ US) = maimaimpoana
Afaka maimaimpoana raha toa ka nody sahirana ny vokatra tao amin'ny trano fanatobiana CJ US
Ny vidin'ny vokatra sy ny vidin'ny fandefasana ihany no ataonay rehefa mandefa vokatra mivantana avy any amin'ny trano fanatobiana amerikanina izahay. Ny vidiny efa voalaza app.cjdropshipping.com
Tsy misy fametrahana fandaharana
Tsy misy volana
Tsy misy vidim-bidy.
ASA TOKONY TRANO FIVAROTANA AN-TRANO ASY (VOA TSY MISY TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO) = FIVAROTANA TANANA + FIVORIANA + FAMPANDROSOANA + FAMPISORANA
Vidio ny vola
$ 0.8 / CBM / Andro: Maimaimpoana ny andro 30 voalohany ho an'ny mpanjifa vaovao. Ny vidin'ny trano fanatobiana entana dia atao amin'ny $ 0.8 / Cubic Meters / Day taorian'ny andro 30.
$ 1.5 / CBM / Andro: tahan'ny fihenam-bidy ambany
MAIMAIM-POANA: Ny fanodinana isan'andro isan'andro amin'ny SKU dia mihoatra ny baiko 100 ary mihoatra ny 50% ny tahan'ny fanovana isam-bolana
$ 0.2 / kg: $ 0.2 / kg - ambany indrindra $ 10
$ 350 / 20GP: vola amin'ny 20GP kaonty
$ 500 / 40GP: vola amin'ny 40GP kaonty
0.1-50g: $ 0.60 / entana
51-100g: $ 0.80 / entana
101-500g: $ 1.00 / entana
501-1000g: $ 1.30 / entana
1-2kg: $ 1.50 / entana
2-5kg: $ 1.80 / entana
5-10kg: $ 3.00 / entana
10-15kg: $ 5.00 / entana
(Vidin'ny fandefasana = Fandefasana entana avy any Shina mankany Etazonia + Etazonia Domestialy)
By Sea (Minimum 100kg): Fanaterana Andro 15-30 - $ 2.4 / kg
By Air (Minimum 30kg): Fanaterana Andro 7-10 - $ 4.2 / kg
By Air (Minimum 30kg): Fanaterana Andro 2-4 - $ 7 / kg
By Air (Minimum 100kg): Fanaterana Andro 2-4 - $ 6 / kg
Azafady jereo azafady eto amin'ity fitaovana ity: https://app.cjdropshipping.com/myCJ.html#/myCJShippingCalculation
Safidio ny fomba fandefasana amin'ny alalàn'ny USPS + ary ampidiro ny lanjan'ny baiko, dia ho eo ny vidin'ny fandefasana.
Vola fanondrana entana: $ 0.05 / vokatra - Izay rakitra ilaina amin'ny famatsiam-bola, izany hoe ny takelaka misy SKU marobe
Fangatahana entana sy kojakoja: $ 0.2 ea. - Ireo fitaovana fonosana, fitaovana izay mitentina mihoatra ny $ 0.2 dia ho raisina fanampiny fanampiny
Vidiny fonosana: $ 0.1 / vokatra - Fampidinana ireo vokatra ao anaty fonosana
Famaovana amin'ny marika: $ 0.1 / marika - Mametraka takelaka ho an'ny vokatra
CHINA WAREHOUSE SERVICE FEE (vokatra namboarina na natsatsoina tany amin'ny trano fitobianay any Chine) = maimaimpoana
Afaka maimaimpoana raha toa ka mivoaka ao amin'ny trano fitobianay any Chine ny vokatra
Ny vidin'ny vokatra sy ny vidin'ny fandefasana ihany no ataonay rehefa mandefa vokatra mivantana avy any amin'ny trano fitehirizam-bokon'i Shina izahay. Ny vidiny efa voalaza app.cjdropshipping.com
CHINA WAREHOUSE SERVICE FEE (vokatra tsy natomboka na notsofina tany amin'ny trano fanatobianay tany Shina) = FIVORIANA TANANA + FAMPANDORANA + FAMPIDORANA
Vidiny fanampiny ho an'ny serivisy fanampiny
$ 0.6 / CBM / Andro: Maimaimpoana ny andro 90 voalohany ho an'ny mpanjifa vaovao. Ny vidin'ny trano fanatobiana entana dia atao amin'ny $ 0.8 / Cubic Meters / Day taorian'ny andro 30.
$ 1.2 / CBM / Andro: tahan'ny fihenam-bidy ambany
0.1-50g: $ 0.20 / entana
51-100g: $ 0.30 / entana
101-500g: $ 0.40 / entana
501-1000g: $ 0.60 / entana
1-2kg: $ 1.00 / entana
2-5kg: $ 1.50 / entana
5-10kg: $ 2.00 / entana
10-15kg: $ 4.00 / entana
ary ampidiro ny lanjan'ny baiko, avy eo ny vidin'ny fandefasana.
Mivarotra ianao - mandefa loharano sy sambo izahay!
Archives Select Month Oktobra 2019 (4) Septambra 2019 (5) Aogositra 2019 (10) Jolay 2019 (34) Jona 2019 (28) May 2019 (9) Aprily 2019 (10) March 2019 (10) Febroary 2019 (11) Janoary 2019 (15) Desambra 2018 (10) Novambra 2018 (13) Oktobra 2018 (2) Septambra 2018 (25) Aogositra 2018 (4) Jolay 2018 (2) Jona 2018 (3) May 2018 (14) Aprily 2018 (5) March 2018 (6) Febroary 2018 (1) Desambra 2017 (1) Septambra 2017 (7) Aogositra 2017 (10) Jolay 2017 (7) Jona 2017 (5) May 2017 (7) Aprily 2017 (5)
Sokajy Select Category Fankasitrahana avy aminay (202) Vaovao momba ny fandefasana rano (117) Ny fanavaozana ny politika momba antsika (10) Fomba fandefasana (26) Torolalana ho an'ny dingana (41) Inona no ataontsika (15)
Ahoana ny fomba fiasan'ny CJ!
Maninona no tsy namboariko ireo nomerao fanaraha-maso mba hiantsena?
Inona avy ireo olana mahazatra amin'ny fivarotana Woocommerce ary inona no tokony hataoko?
Nahoana no tsy vita ny lisitry ny fivarotana eBay sy ny tokony hataoko?
Ahoana ny fampifandraisana ny fivarotanao Shopee amin'ny CJ Dropshipping APP?
Ahoana ny fampiasana fomba fiasa vaovao fonosana vaovao?
Inona no valisoa ao amin'ny teboka sy ny fomba fampiasana azy?
Ahoana ny fampifandraisana ny fivarotanao Lazada amin'ny CJ Dropshipping APP?
Ahoana ny fomba hiterahana baiko misy invoice mandritra ny fotoana voafetra?
Ahoana ny famindrana fivarotana amin'ny kaonty CJ hafa?
Ahoana no fampiasana ny serivisy CJ Fahatanterahany?
Ahoana ny fomba hametrahana lamina na fitsapana fitsapana?
Ahoana ny fomba hametrahana ny politikam-pandraharahana fivarotana fandefasana entana amin'ny mpanjifa?
Maninona no tsy mandeha ny fanaraha-maso ny isa? Manamboara isa fanaraha-maso nomera alohan'ny na aorian'ny fanaterana
Modely maro amin'ny raharaham-barotra, kalitao marobe samihafa
Mamorona pejy fanaraha-maso Parcel miaraka amin'ny Appe Order ho an'ny Shopify
Ahoana ny fomba fanomezan-dàlana ny fivarotana Wix amin'ny CJDropshipping.com
Mampifandray CJDropshipping miaraka amin'ny kaontinao Amazon Seller
Ahoana no hanamarinana ny adiresy mailaka aorian'ny fisoratana anarana
Ahoana ny fampiasana famokarana tsy miankina amin'ny CJ Dropshipping?
Atombohy - Famintinana ny CJDropshipping.com
Ahoana ny fomba hanodinana ny ambaratonga famokarana CJ amin'ny fivarotana Shopify anao
Ahoana ny fomba famoahana tapakila tapakila amin'ny fitantanana CJ?
Ahoana ny mampifandray ny eBay eBay amin'ny CJ Dropshipping APP?
Ahoana ny fampiasana ny pirinty CJ amin'ny fangatahana mitaky ny fampivoarana ny orinasanao Dropshipping - volavolan'ireo mpividy
Ahoana ny fampiasana ny pirinty CJ momba ny endri-javatra takiana mba hampivoarana ny orinasanao Dropshipping - volavin'ireo mpivarotra
Ahoana ny fampiasana ny fahatanterahan'i Amazon (FBA) miaraka amin'ny CJ Dropshipping App
Ahoana no fomba ilazana ny baiko efa novidiana tamin'ny CJ?
Ahoana ny fampiasana serivisy fitifirana lahatsary amin'ny CJ Dropshipping
Ahoana ny fampiasana CJ Google Chrome Extension ho an'ny 1688, Fandefasana Taobao Drop
Ahoana ny loharano avy any Taobao sy mahita ny vokatra mampiavaka ny fironana?
Ahoana ny fomba hamerenana ireo fandefasana fandefasana fandefasana amin'ny CJ APP?
Ahoana ny fizarana baiko mavesatra amin'ny CJ APP?
Ahoana ny fanaovana lisitra na famoahana ny vokatra CJ any amin'ny fivarotana an-tserasera?
Ahoana ny fomba hividianana asa famokarana na fivarotana amin'ny CJ APP?
Ahoana ny fomba hampifandraisana ny ShipStation amin'ny fomba manual?
Ahoana ny fomba hampifandraisana ny WooCommerce amin'ny fomba manual?
Ahoana ny fanokafana ny fifamaliana eo amin'ny CJ APP？
Ahoana ny fomba fanamboarana ho azy dia manary ny fanodinana baiko fanaterana avy amin'ny CJ APP
Ahoana ny fomba hampifandraisana ny Shopify Shops amin'ny app.cjdropshipping.com
Ahoana ny fomba fandefasana fangatahana famokarana amin'ny app.cjdropshipping.com
Momba ny fandefasana Drop
Ahoana no fomba hahalasa menaka
Ahoana ny fomba hametrahana baiko DropShipping amin'ny CJ
Ahoana ny fomba fandefasana ny fangatahana famarotana vokatra ho an'ny CJ
Miasa koa izahay
Fitaovana fanakorontanana & Famandrihana Custom
Hamoaka ny fitakiana
CJ Drôma momba ny fandefasana Politika
Politika famerenam-bola ny famerenam-bola
Vidy fandefasana sy fotoana fandefasana
Fangatahana ny famarotana vokatra
Apetraho ao amin'ny paosy CJ
© 2014 - 2019 CjDropshipping.com. Zo rehetra voatokana.